सातामा कति पटक सेक्स गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ? - Nayabulanda.com
रातकोभन्दा विहानीपखको सेक्सलाई किन राम्रो मानिन्छ ?
नयाँ बुलन्द ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार १०:१५ 265 पटक हेरिएको
काठमाडौं । यौन शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा हाम्रो भावना, कल्पना जस्ता मानसिक कुराले प्राथमिकता पाउँछ । जुन यौन क्रियामा भावना हुँदैन त्यसले चरमसुख पनि दिदैन । सेक्स मानव जीवनदेखि अन्य जीवआत्माका लागि अपरिहार्य नै छ । सेक्सबिनाको जीवन अधुरो हुन्छ समेत भनिन्छ । सेक्सले मानसिक मात्र होइन शारीरिक रुपमा पनि फाइदा पुर्याउँछ ।
नियमित सेक्सले अनावश्यक मोटोपना घटाउँछ
अमेरिकाको एक सोध वैज्ञानिक र सेक्स सलाहकार डा. डेबी हरबेनिकले एक अनुसन्धानको क्रममा सेक्सको सबैभन्दा उत्तम समय विहान नै रहेको पत्ता लगाए । डा. डेबीका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा हाम्रो शरीरबाट निस्कने केमिकल्सबाट धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । जसबाट खुसी मात्रै होइन स्वस्थ पनि भइन्छ । यसैगरी अमेरिकी अर्का सेक्स सलाहकार जेन ग्रीनरका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा राम्रो व्यायाम पनि हुन्छ । सेक्स एकप्रकारको व्यायाम पनि हो । उपयुक्त समयमा नियमित सेक्स गरे पनि मोटोपन घट्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
सेक्स कतिपटक गर्ने भन्ने नापतौल छैन । आवश्यकता अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । उपयुक्त समयमा र आफ्नो पार्टनरको मुड हेरेर सेक्स गर्न सकिन्छ । त्यसैले एकसातामा तीनपटक सेक्स गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विहानमा सेक्स गर्दा महिला र पुरुष दुबैमा प्रजनन क्षमता पनि बढ्छ । कुन समयको सेक्स फलदायी हुन्छ ?
विहानको समयमा पूजापाठ गर्ने, खाना पकाउने, अफिस जाने तयारी आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसको लागि प्रयाप्त समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने विहानमै सेक्स गर्दा राम्रो । विहानको समयमा सेक्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउँदै मजा लिन पनि सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसो गर्दा आफ्नो पार्टनरसँग अझै बढि आत्मियता प्राप्त पाउने मात्रै होइन रमाइलो पनि हुन्छ ।
विहानमा सेक्स गर्ने तर रातिमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । रातिमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला सेक्स गर्छन् धेरैजसो जोडीले । तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातिमा सेक्स गर्नु भन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातिको सेक्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ ।